Faransiiska, Jarmalka ayaa ka soo dhex muuqday kulamadii Nations League ee la ciyaaray… – Hagaag.com
Faransiiska, Jarmalka ayaa ka soo dhex muuqday kulamadii Nations League ee la ciyaaray…
Posted on 15 Nofeembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xulalka heysta Koobka Adduunka ee France iyo Jarmalka ayaa saameynta xiddigahooda kooxda Chelsea ay u horseeday in ay ku guuleystaan ciyaarihii ​​Nations League sabtidii.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea N’Golo Kante ayaa dhaliyay goolkiisii ​​labaad ee caalami ah iyadoo France ay 1-0 kaga badisay kooxda heysata horyaalnimada Yurub ee Portugal ciyaar ka dhacday Lisbon sidaasina ku xaqiijisatay booskeeda finalka sanadka soo socda.
Kante ayaa sida ugu dhaqsaha badan uga falceliyey qeybtii labaad ee ciyaarta markii uu shabaqa soo taabsiiyay goolka guusha daqiiqadii 53aad taasoo keentay in France ay hogaanka u heyso Group-kooda.
France ayaa seddex dhibcood ku hogaamineysa xulka Portugal ee Cristiano Ronaldo ka hor kulanka Talaadada ay kula ciyaarayaan Sweden magaalada Paris laakiin waxaa la hubaa inay kaalinta koowaad ku guuleysan doonaan iyagoo heysta rikoor fiican.
Tababaraha xulka France Didier Deschamps ayaa ka hadlay ka dib guushii ay ka gaareen koox reer Portugal oo ku guuleysatay horyaalkii ugu horeeyay ee Nations League ee ka dhacay garoonkooda sannadka 2019.
Saaxiibka Kante ee kala ciyaara Horyaalka Ingiriiska Timo Werner ayaa dhaliyay labo gool iyadoo Jarmalka uu kaga badiyey Ukraine 3-1.
Guushaan ayaa ka dhigeysa in Jarmalka aan laga badinin 12kii kulan ee ugu danbeysay islamarkaana ay hogaanka u qabtaan group-kooda, iyagoo hal dhibic ka sareeya Spain oo kaalinta labaad ku jirta oo lagu wado inay ku ciyaarayaan garoonka Sevilla Talaadada.
Mgaalada Basel, Ramos ayaa seegay labo rigoore iyadoo Spain ay u baahneyd gool kaasi oo ka soo daahay oo ugu dambeyntii uu dhaliyay Gerard Moreno si ay barbaro 1-1 ula galaan Switzerland.
Remo Freuler ayaa hogaanka u dhiibay Switzerland daqiiqadii 26-aad laakiin waxaa casaan ka qaatay Nico Elvedi.
Spain ayaa ugu dambayn heshay goolka bar-baraha daqiiqadii 89-aad iyada oo Moreno uu ka faa’iidaystay is dhigashada daafaca Switzerland.
Ka dib markii laga badiyay dhamaan afartii kulan ee furitaanka Nations League, Sweden ayaa ugu danbeyn qaabkeeda ka heshay Solna, iyadoo 2-1 kaga badisay Croatia oo kaalinta labaad ka gashay Koobka Adduunka.
Croatia ayaa 2-1 ku garaacday Sweden kulankoodii ugu horreeyay.
Cudurka faafa ee coronavirus ayaa sidoo kale keenay in UEFA ay baajiso ciyaartii Axada maanta dhex mari laheyd Romania iyo Norway kadib markii maamulka Norway ay ka mamnuuceen kooxda inay u safraan Bucharest sababo la xiriira cudurka Covid-19.
Wasiirka caafimaadka ee Norway ayaa ku amray kooxda in aysan safrin ka dib markii daafaca Omar Elabdellaoui, oo u ciyaara kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga, laga helay cudurka coronavirus.